トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Time kusangana mweya naye, uye nguva uye nemasaini
Kana ukasangana mweya naye mumwe nokukwezvwa mweya, ndiko kana waizonzwa wavelength mumwe mumwe. Kuti nguva ndiwo musiyano pakati vamwe vanhu, vamwe vanhu vanosangana ipapa, tiri vanhu vane kusangana kwemaminitsi mashomanana kupinda vayaruka.
Uyezve, kana pane kunyange kana munhu anoziva mwoyo kana mweya wako, nokuti dzimwe nguva hazvisi Chokwadi, hapana shoma nyaya isina yakacherechedza vakasangana nazvo.
Kuti akati, pane chinhu chakadai nguva kunge kusangana ari mweya wako, zvinonzi vakawanda vari kuchinja upenyu hwomunhu. Vanhu Ndakasangana nenguva iyo munhu yava mukana wokuchinja mararamiro, ndiwe kunge mweya naye.
mweya naye kuedza kubata chiratidzo kusangana mweya naye zvave akatiwo kuti pane chiratidzo zvakunoreva. Uchaitei kubva chiratidzo chacho. Pandakaramba anotaurwa muchitsauko chapfuura
? pakachinja, kungangova chaizvo chiratidzo chokuti kusangana mweya naye kana iwe kwazisai kuchinja hwangu. Somuenzaniso, kupatsanura mabasa uye kurega vana nguva, mudiwa, akadai kana toreva kugara handizivi nyika, kana kuti mamiriro yachinja kusvikira zvino aiwanzoti chiri nguva.
nguva kuziva kubatana pakati uye kwevanhu
ikozvino haazi kuti akasangana mweya wako, panewo mukana vanhu Ndakasangana maererano vanhu kumativi ari mweya naye. Ukama vanhu, zvichiitirwa kana mugumisiro ari Kusangana, akadai havatarisiri pachangu. Achiziva akwirwe yakadaro, kana kuti kuda, zvingava kuti vagumburwe mhiri mweya naye kuti chero mukana.
? zvakanaka manzwiro
basa uye upenyu kana iwe tanga iri, chokwadi kudenha mu chinhu pachako Kunyange kana kunzwa yave iri kuti mavhoriyamu netsaona wako kusangana mweya naye.
mweya kana uzere simba, unogona kukwezva mweya naye kunzwa wavelength. Manzwiro uye kushanda nesimba kuti zvinhu zvose, kana manzwiro kunge dzichibuda kuti kusandura dzavo saka kure, ngatiitei kuziva anosangana nevanhu.
nguva kusangana chinokosha chinhu
mweya naye kuti varege kutadza nguva kazhinji nyore kunzwisisa chinhu chinokosha zvatsanangurwa pamusoro. Kuti akati, kana pasina kuziva kuti ari kukwezvwa mweya wako, zviri zvakare kuti yaizopfuura asinei.
Naizvozvo, Makakatanwa ari kanyanga nguva dzose kutsvaka mweya wako, ngativei vane kuziva inoshanda kubata pfungwa kana anokumhan'arira akazviratidza pamberi pemaziso. Uye kupfuura chinhu, zvakakosha kupedza zuva nezuva vane zvakanaka simba.